Cudurka Madaxwayne Cabdi Iley oo Calwasaad Ahaa iyo Jijiga oo Cabsidii Ciirtay! – Rasaasa News
Cudurka Madaxwayne Cabdi Iley oo Calwasaad Ahaa iyo Jijiga oo Cabsidii Ciirtay!
Jijiga, Nov 22, 2014 – Madaxwaynaha Ismaamulka Soomaalida Atoobiya, Cabdi Maxamuud Cumar oo in ka badan todobaad caafimaad u joogay dibada ayaa la filayaa in uu dib ugu soo laabto Jijiga.
Madaxwayne Cabdi maxamuud Cumar ayey xaalad caafimaad daro la soo daristay, ka dib kolkii uu ka horyimid qalalaase siyaasadeed oo ka dhex bilowday Ismaamulka gudihiisa labdii bilood ee tagay. Xiligaas oo ay ka soo horjeedsadeen 7 xubnood oo ka mid ahaan jiray gudiga fulinta. Gudiga fulinta ee Ismaamulka Soomaalida Atoobiya ayaa ka kooban 11 xubnood, boqolkiiba 64% ayaa ka soo horjeedsaday hogaankiisa, meesha boqolkiiba 36% uu isagu ku jiro ay taageertay hogaankiisa.
Sida uu qabo xeerka lagu maamulo degaanku, waxay ahayd in uu meesha ka baxo madaxwayne Cabdi Maxamuud Cumar, laakiin waxaa difaacay saraakiisha qaybta Bari ee ciidanka Atoobiya oo si dadban u maamula degaanka Soomaalida.
Madaxwayne Cabdi oo aan filayn in ay ka horiman karaan dhalinyrada uu ka dhex xushay bulshada degaanka Soomaalida, ayaa qaadanwaa ku dhacay sababay in uu ku laabto arimo xumayn kara caafimaadkiisa. Madaxwayne Cabdi Iley ayaa horay qaliin loogu sameeyey sanadkii 2013-ka, lana faray in uu wax ka badalo hab nololeedkiisa.
October 14-keedii ayaa si deg dega loogu qaaday dalka Thailand, halkaas oo uu galay Bumrungrad International Hospital. Baadhid dheer xaalada caafimaad ee madaxwayne Cabdi Iley ayaa haatan wanaagsan, waxaana la filayaa in uu dhawaan ku soo laabto Jijiga.
Dawlada dhexe iyo Ismaamulka Soomaalida ayaan ka hadal xaalada caafimaad ee madaxwaynaha, laakiin bogga ku hadla afka madaxwaynaha ee Cakaara.com, ayaa qoray in booqasho saaxiibtinimo uu ku tagay dalka Shiinaha.
Xaalada siyaasadeed ee degaanka ayaan wali deganayn, in kasta oo mudo bil gudaheed ah uu labo goor madaxwayne Cabdi Iley isku baandheeyey golaha maamulkiisa. Cadaadiskii faraha badnaa ee saaraa shacabka degaanka ayaa la fududeeyey, ka dib kolkii ay dawlada dhexe hoos u dhigtay awooda madaxwayne Cabdi Iley. Waxaa kale oo xabsiga laga siidaayey kumanaan maxaabiis ah oo sharci daro ugu jiray Jeel-Ogadeen.
Khilaafkii masuuliyiinta Ismaamulka Soomaalida Atoobiya, waxaa xaflado lagu xoojinayo taageerada madaxwayne Cabdi Iley ka dhigay dalalka galbeedka Jaaliyaad Jaahil ka ah waxa ka jira degaanka.
Magaalada Jijiga, waxaa ku sugan xubnihii gudiga fulinta ee ay isqabteen madaxwayne Cabdi Iley, kuwaas oo mucaaradnimo la jooga Jijiga, oo aan haatan la xidhi karin. Magaalada Jijiga oo muddo saddex sano iyo dheeraad ah ayna dadku hadal qaadi karin dawlada iyo hawlaheeda ayey haatan dadku si xor ah uga sheekeeyaan arimaha maamulka.
Dawlada dhexe ee Atoobiya ayaa isku khilaaftay xalinta arimaha degaanka Soomaalida, kulan u khilaafkan ka yeeshay xisbiga EPRDF dhawaan, ayuu Raysal wasaare Atoobiya Xaylemaaryam ka yidhi “sharcidarada uu maray Ismaamulka Soomaalidu khatar buu ku yahay guud ahaan Atoobiya.”
Khilaafka iyo isxag xagashada xoogan ee u dhaxeeya masuuliyiinta Ismaamulka Soomaalida, ayaa lala sugayaa doorashada bisha May 2015. Waxaana la isla qaatay in madaxwayne Cabdi Iley uu qaado koobka, kana talaabo xadka u yiil madaxwayneyaashii soo maray Ismaamulka Soomaalida Atoobiya.